VP HR ईमेल सूची | युएसए कार्यकारी ईमेल सूची | पछिल्लो मेलिiling डाटाबेस
राज्य मेलिङ सूचीहरू
VP HR ईमेल सूची
नवीनतम मेलिङ डाटाबेस » VP HR ईमेल सूची
VP HR ईमेल ठेगाना
VP HR ईमेल सूचिहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट HR व्यक्तिको पूरा सम्पर्क विवरणको 9157 VP हुन्छ। हुनसक्छ यस ईमेल सूचीले तपाईलाई बढि मद्दत पुर्‍याउँछ बिक्रीलाई पनि मानव संसाधन व्यक्तिको VP का साथ व्यापार सम्बन्ध विकास गर्न। तपाईं 90% सही जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ किनभने सबै डाटा प्रमाणित भयो। तपाइँ अद्वितीय प्रतिलिपि पाउनुहुनेछ किनभने केवल एक ग्राहकको लागि एक प्रतिलिपि। तपाईले हामीबाट आफ्नो र लक्षित एचआर व्यक्ति ईमेल डाटाबेस निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ किनकि हामीसँग राम्रो टोली छ।
VP HR ईमेल सूचीले तपाईंलाई संयुक्त राज्य कम्पनीबाट HR व्यक्तिसम्म पुग्न मद्दत गर्दछ। अन्ततः हामीसँग HR व्यक्तिको VP बाट अद्वितीय राम्रो सूची छ। सबै VP HR ईमेल सूची विवरणहरू माथि।
अब खरीद गर्नुहोस् ताजा VP HR ईमेल सूची
रेकर्डहरूको मात्रा: 9,157
(सबै रेकर्डहरूले ईमेल ठेगानाहरू समावेश गर्दछ!)
लिस्टि Inc समावेश:
* पहिलो नाम * अन्तिम नाम * कम्पनी नाम * रोजगार शीर्षक * ईमेल आईडी * फोन नम्बर
* ठेगाना * शहर * राज्य * जिप कोड * कम्पनी वेबसाइट
फाईल प्रकार: एक्सेल, CSV
(एक पटक शुल्क)
डेलिभरी: तत्काल डाउनलोड गर्नुहोस्।
कुल लागत: $ 466
अहिले खरिद गर
VP HR ईमेल सूची प्रश्न र उत्तर
जब तपाईंको सम्पर्क ठेगाना अन्तिम अपडेट भयो?
प्रत्येक महिना हामी हाम्रो सम्पर्क ठेगाना अपडेट गर्दछौं। हामी अधिक स्रोतहरूबाट हाम्रो डाटा निर्माण गर्दछौं। त्यसैले प्रत्येक महिना डाटा प्राप्त पछि, हामी अपडेट गर्छौं।
जब डाटा डेलिभर हुन्छ?
4 घण्टा भित्र अर्डर गरे पछि तपाईंको डाटा डेलिभर हुनेछ र कस्टम सम्पर्क डाटाको लागि हामी डाटा निर्माण गर्न अधिकतम 72 घण्टा लिन्छौं।
डाटा सटीकता के हो?
हामी तपाईंलाई 95% सटीकता डाटा प्रदान गर्दछौं। हाम्रो सबै सम्पर्क ठेगाना मानव र कम्प्यूटर आँखा प्रमाणित छ।
कस्तो प्रकारको डाटा तपाईले प्रदान गर्नुहुन्छ?
हामी व्यापार सम्पर्क ठेगाना डाटा उपभोक्ता सम्पर्क ठेगाना डाटा र कम्पनी सम्पर्क व्यक्ति कम्पनी कर्मचारी शीर्षक र काम समारोह डाटा द्वारा डेटा प्रदान गर्दछौं। साथै तपाई ई-मेल सूची निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ लक्षित व्यक्तिको सम्पर्क जानकारी उद्योग वा देशले राज्य र शहर द्वारा।
म तिमीलाई किन विश्वास गर्दछु?
हामी 2012 मा व्यापार गर्दैछौं। हामी डाटा प्रदायकका लागि सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। सबै सम्पर्क ठेगाना 95% सही छ। यदि तपाईं 5% बाउन्स डाटा भन्दा बढी पाउनुहुन्छ भने हामी हाम्रो डाटा प्रतिस्थापन गर्नेछौं। त्यो हाम्रो ग्यारेन्टी हो।
सम्पर्क ठेगानाको लागि कस्तो ढाँचा?
हामी तपाइँलाई तपाइँको अर्डर गरिएको सम्पर्क ठेगानाको लागि उत्कृष्ट वा CSV ढाँचा प्रदान गर्दछौं।
पत्राचार सूचीहरूको अनुमति छ?
हाम्रो सबै सम्पर्क ठेगाना एक अनुमति आधार हो र GDRP तयार छ।
तपाईको डेटा स्रोत के हो?
हाम्रो डाटा स्रोत विभिन्न प्लेटफर्म हो। हामीले विश्वसनीय डाटाबाट सबै डाटा लग्यौं र डाटा स्रोत मात्र अप्ट इन गर्‍यौं। हामी व्यापार स्रोत र उपभोक्ता स्रोतबाट ईमेल सूची निर्माण गर्छौं।
ग्राफिक डिजाइन मेलिंग सूची
हेल्थट्र्याक्स कर्पोरेट ईमेल
हाई स्कूल कोच ईमेल सूची
उच्च विद्यालय वरिष्ठ मेलिंग सूची
अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्